Cruso Granito: ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်ရေးနာကိရိယာ ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ကြွေထည်နှင့်ကြွေထည်ပစ္စည်းများအရည်အသွေးစံသတ်မှတ်ချက်ကိုအတည်ပြုသည်ISO 9001:2015 norm. ကျွန်တော်တို့ CRUSO - Surfaces Ceramica ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးဖြင့်အာမခံရန်နှင့်ကြင်နာသောထူးခြားသောအုပ်ကြွပ်များထဲမှတစ်ခု. ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့နှင့်အထူးကျွမ်းကျင်သူများသည် Center ကိုစောင့်ရှောက်နေကြပြီဖြစ်သည်.
ကျွန်ုပ်တို့၏အမှတ်တံဆိပ်အမည် “CRUSO” အမည်ကိုကျော်ကြားသောဝတ္ထုမှမှုတ်သွင်းသည်Daniel Defoe အမည်မဲ့“ROBINSON CRUSOE”.ROBINSON CRUSOE နောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်းကိုတွေ့ရသည့်အနေဖြင့်မရှိတော့သည့်နေရာ၌မရှိတော့သည့်ကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ်တွင်သေးငယ်သောအချိန်၏ခံနိုင်ရည်၏ဇာတ်လမ်းသည်အဓိကစိတ်ကူးအဖြစ်မပိုင်ဆိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်.
ကြွေပြားများသည်နှစ်ပေါင်းရာနှင့်ချီသောနေရာများနှင့်ကပ်လျက်ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အပြင်ဘက်နှင့်အပြင်ဘက်နှင့်အပြင်ဘက်တွင်ပါ0င်သည်။. လက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောလက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအနုပညာကြွေပြားများသည်လှပမှုနှင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောပုံစံများဖြစ်သည်,.
“CRUSO - Surfaces Ceramica" ပစ္စည်းများကိုသွေဖောင်းတွင်းရှိတိုးတက်မှုအသစ်ရရန်ပစ္စည်းများကိုစတင်ရန်စတင်ပါ. ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းစျေးကွက်အတိုင်းအိမ်ထောင်စုများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အစီအစဉ်တွင်မူရင်းနှင့်တီထွင်မှု. ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အရှိန်အဟုန်ကိုထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်ချက်များနှင့်လိုအပ်ချက်များကို "Cruso - Surfaces Ceramica" သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားအကောင်းဆုံးနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော0န်ဆောင်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်စီစဉ်ထားသောနေရာမှ၎င်းတို့၏ပစ္စည်းများကိုတည်ဆောက်ပါ.
CRUSO Surfaces Ceramica’s မစ်ရှင်သည်ပြည်ထဲရေးဒီဇိုင်းများ, ဗိသုကာများနှင့်တောင်းဆိုသည့်ဖောက်သည်များအားအသုံးပြုသောနေရာတိုင်းအတွက်သင့်တော်သောကြွေထည်များနှင့်အများအားဖြင့်0ယ်ယူရန်လိုအပ်ပြီးစျေးကွက်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီအသုံးချခြင်းကိုသေချာစေပြီးတစ်ချိန်တည်းတွင်အကောင်းဆုံးသောနည်းပညာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်.
ထွက်မတ်တပ်ရပ်သောမြင့်မားသောအကွာအဝေးဗိသုကာဆိုင်ရာဖြေရှင်းနည်းများကိုဆက်ကပ်ဆန်းသစ်ဖို့ဆက်လက်ဆန်းသစ်ရန် CRUSO Surfaces Ceramica ကဏ္ in တွင် ဦး ဆောင်အမှတ်တံဆိပ်အနေဖြင့်၎င်းသည်၎င်းကို Glocal (Global နှင့် Local နှင့် local and local) တို့၏လိုအပ်ချက်များကိုအကောင်းဆုံး0န်ဆောင်မှုပေးသည်။.
Infinity Roccelain Slab
အလျင်အမြန်ကြီးထွားလာခြင်းစတိုင်နှင့်ဗေဒများအတွက်အစာစားချင်စိတ်ကိုအလားတူကြီးထွားလာသည် “CRUSO – Surfaces Ceramica”, အဆိုပါကျပုံစံကိုချိုးသောထုတ်ကုန်.!!